Axmed Madoobe: Sida wax ku socdaan doorasho kuma dhici karto | Dhacdo
Home Wararka Maanta Axmed Madoobe: Sida wax ku socdaan doorasho kuma dhici karto
Axmed Madoobe: Sida wax ku socdaan doorasho kuma dhici karto
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Madaxweynaha Jubbaland ayaa galabta dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo, oo muddooyinkii ugu dambeysay uu ka maqnaa, isagoona ka hadlay muranka hareeyay arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo xaaladda Gobolka Gedo. Gedo waxaa maanta ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeedo qodobadii ay maalintii Khamiistii Magaalada Muqdisho ka soo saareen Midowga Musharaxiinta.
Madaxweynaha Jubbaland oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Madaxda Dowladda Federaalka looga baahan yahay inay fuliyaan heshiisyadii horey loo gaaray.
Madaxweynaha ayaa sheegay in lagu heshiiyay in Maamul Goboleed kasta ay doorashada soo socoto ka dhacdo laba magaalo. Marka Jubbaland noqotana ay tahay in doorashada ka kala dhacdo Magaalooyinka Kismaayo iyo Garbahaarey, ha yeeshee Garbahaarey aanay dowladdu weli fulin heshiiskii horey loo gaaray, oo ahaa in Maamulka Gobolka Gedo ee taabacsan Jubbaland, ee fadhiya Magaalada Kismaayo ay dib ugu laabtaan Magaalada Garbahaarey.
Madaxweynaha ayaa intaa ku daray inay diyaar u yihiin doorashada in ay ku kala qabtaan Kismaayo iyo Garbahaarey, laakiin waa goorma, waa marka buu yiri ay gacantayada ku soo noqoto, ee Gudoomiyihii Gobolka, Kuxigeenkiisa iyo Gudoomiye-yaasha Degmooyinka taggaan Garbahaarey.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa intaa ku daray “Doorasho kuma dhaceyso sida ay maanta tahay iyo nooca afduub uu yahay, doorasho kuma dhaceyso.”
Hadalka Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku soo aadaya, xilli Jubbaland iyo Puntland aanay weli soo magacaabin Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka iyo Xalinta Khilaafaadka, ee labadaasi maamul ku metelaya Guddiyada Doorashooyinka Qaranka.
Khamiistii ayay ahayd markii Midowga Musharaxiinta ay si weyn uga biyo diideen dhabaha ay dowladda ku waddo maamulidda doorashooyinka.
Previous articleHoggaanka Tigreyga oo ka qayliyay duqaynta culus ee ku socota Mekelle
Next articleRooble oo kulan deg deg ah isugu yeeray laamaha ammaanka (SAWIRRO)